Maalinta: Febraayo 24, 2019
Dhismaha Cusub ee Cusub oo leh 2 Milyan Milkiilihii Mashruuca ee Garoonka Kahramanmaraş
Isaga oo ka hadlaya Kahramanmaraş Rally, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu ka hadlay maalgashiga laga sameeyay Kahramanmaraş iyo sidoo kale wuxuu siiyay macluumaad ku saabsan dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha. [More ...]
Dhibaatooyinka Gaadiidka Guryaha ee Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Duqa Burhanettin Shepherd Afyonkarahisar Duqa iyo Musharaxa xisbiga AK Mehmet Zeybek, aasaasay at the University of Yalova, Turkey ugu horeysay ee Madaxweyne Professor Waaxda Engineering Gaadiidka Dr. Iyadoo Rafet Bozdoğan [More ...]
Gaadiidka aan tooska ahayn iyo gaadiidka leh ee waddada New Street
Mid ka mid ah maal-gashiga cusub ee Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli ee dhinaca gaadiidka, mashruuca Yeni Cadde ayaa soo gabagaboobay. Wadada cusub ee balaca mitirka 30, oo ah meesha lugeeyayaasha iyo amniga gawaarida sidoo kale la tixgeliyo sidoo kale gaadiid aan kala go 'lahayn. [More ...]
Dhibaatada Wadada Dhererka ah
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktas, Orhaneli, Keles, Harmancık iyo Büyükorhan 40 riyada sanadlaha ah ee Mountain Road ayaa lasoo gabagabayn doonaa sida ugu dhaqsaha badan, waxayna sheegeen in gobolku noqon doono xarunta dabiiciga iyo xayawaanka xoolaha. [More ...]
Mevlüt Uysal: An Shipyard Istanbul waxay samayn doontaa Xarunta Reerka ee Dib u soo Kabashada Xarrakada Isbaanish
Aasaaska soo jiidashada cusub ee Istanbul, Tersane Istanbul, oo laga dhisi doono aagga Old Halic Shipyard, ayaa la dhagax dhigay xaflad uu ka qeyb galay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Isaga oo ka hadlaya xafladda, Madaxweynaha IMA Mevlüt Uysal wuxuu yiri, Mudane Mudane Madaxweynaha, [More ...]
Iyada oo kumanaan shaqaale ah oo ku sugan Istanbul, AKOM diyaar u yihiin!
Qaybaha galbeedka ee dalkeenna, gaar ahaan Istanbul, waxay ku hoos jireen cimilada qabow iyo roobka illaa saakay aroortii. Awoodda nidaamka, heerkulka hawadu waxay hoos u dhacdaa darajooyinka 8-10 to -1 illaa 2 darajo. [More ...]
Dhismaha Isgaadhsiinta Istanbul
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa yiri: “(Tersane Istanbul) Gobolkan, oo taariikhda ku uraya urinta fikradaha iyo amarada Madaxweynahayagu, wuxuu noqon doonaa xarunta sayniska, sayniska, farshaxanka, dhaqanka iyo dalxiiska.” Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Maanta oo ah Taariikhda 24 Febraayo 1933 Naci Bey, oo shaqaale u ah Shirkadda Wagons ee Faransiiska ee la yiraahdo Hurdada Wagon, ayaa ka xanaaqday hadalka Turkiga oo sheegay in luqadda shirkaddu ay ahayd Faransiis, [More ...]